Hangzhou Jiande Enterprise waxay si deg deg ah dib ugu yeertay in ka badan 100 shaqaale ah, waxayna sadex jibaarantay mushaarkooda si loogu dhiiri galiyo saacadaha dheeriga ah in la sameeyo waji duub! Markii uu ka dilaacay cudurka oof-wareenka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' ee magaalada Wuhan, soo saarista iyo keenista waji duubku waxay noqdeen mawduuc ay dadku aad uga walaacsan yihiin. Sida shirkad hormuud u ah t ...
Gelinkii dambe ee Janaayo 27-keedii, Zhou Jiangyong, xubin ka tirsan Guddiga Joogtada ah ee Guddiga Xisbiga Gobolka, ahna Xoghayaha Guddiga Xisbiga ee Dawladda Hoose ee Hangzhou, wuxuu aaday Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. (soo saaraha wax soo saarka ka hortagga cudurrada) si uu u baaro. Wuxuu carabka ku adkeeyay in ...
Waqtigan xaadirka ah, dagaal ka dhan ah oof wareenka oo uu sababay cudurka coronavirus-ka cusub ayaa bilaabmay. Maaddaama ay tahay "safka ugu horreeya ee difaaca" ee ilaalinta nadaafadda shaqsiyeed, aad ayey muhiim u tahay in la xidho waji-daboolan oo la kulma heerarka ka hortagga cudurrada faafa. Laga soo bilaabo N95, KN95 ilaa maaskarada qalliinka caafimaadka, caadiga ah p ...